बिहीबार नेपाल आइडलमा भोटिङ नहुने, रविले गरे यस्तो खुलासा ! - Everest Dainik - News from Nepal
बिहीबार नेपाल आइडलमा भोटिङ नहुने, रविले गरे यस्तो खुलासा !
काठमाडौं, कार्तिक २१ । एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ अन्तर्गत भोलि (बिहीबार) भोटिङ राउण्ड नहुने भएको छ । तिहार परेकाले भोलि भोटिङ राउण्ड नहुने भएको हो । यद्यपी, प्रतिस्पर्धीले प्रस्तुती भने राख्ने छन् ।
यदि समर्थकले भोलि भोट गरेमा त्यो मान्य नहुने बताइएको छ । यो जानकारी आइडलमा बाँकी रहेका ‘उत्कृष्ठ ८’ मध्येका रवि ओडले जानकारी गराएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा यो जानकारी गराएका छन् । रविले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्-
याे पनि पढ्नुस रवि वड नेपाल आइडलको टप ९ मा पुग्न सफल